कुकुरले किन खुला ठाउँमा से’क्स गर्छ? यस्तो पो रहेछ कारण ! – Patrika Nepal
पुष २८, २०७८ बुधबार 52
काठमाडौँ : असोज र कात्तिक महिनालाई कुकुरहरुका लागि बैं स चढ्ने वा सह’बास गर्ने महिना भनेर भनिन्छ । यो कहानी महाभारत युगदेखि प्रचलित छ । अब जान्नुहोस्, के का रणले कुकुर ज हाँसुकै सम्भोग गरिरहेका भेटिन्छन् भनेर ।
Prevगयक याम बरालको दोस्रो बिहे, लुकाउँदा लुकाउदै पनि बाहिरियो भिडियो
Nextअभिनेता रमेश उप्रेतीको डिभोर्स ? श्रीमती किरणबाट अलग बस्न थाले
महाअल्छी हुन्छन् यी पाँच राशिका व्यक्ति, सुतेरै फाल्छन् समय खेर
काठमाडौंबाट गाउँ जाँदै गरेको बस प`ल्टिँदा एकजनाको मृ`त्यु, २५ जना घा`इते